Android Root၊ ဖုန်းကိုဘယ်လို root လုပ်မလဲ။ ဒီမှာ tutorials! | Androidsis
Android Root ပါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Android operating system ကိုအမြင့်ဆုံးသို့စိတ် ၀ င်စားစေရန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှို့ဝှက်ထားသည့်အလားအလာအားလုံးကိုရယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆော့ဖ်ဝဲလ်များကိုခွင့်ပြုချက်လိုအပ်လိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ application များကို developer များတီထွင်ဖန်တီးထားသည့် system applications များသို့မဟုတ် tools များရှိသည်။ စူပါအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူများဖြစ်လိမ့်မည် အမြစ်.
အမြစ်ကိုအင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရကနေလာပါတယ် အမြစ် y သည်အသုံးအနှုန်းဖြစ်သည် Linux operating systemsAndroid ကိုအခြေခံထားခြင်းဖြစ်ပြီးဆိုလိုသည်မှာ operating system ၏ဖိုင်များနှင့်ဖိုင်တွဲများအားအလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ရန်နှင့်ဖျက်သိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုစနစ်အပလီကေးရှင်းများ (သို့) တရားဝင် Android အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှကိုယ်တိုင်ကူးယူနိုင်သည့်ကိရိယာအမျိုးမျိုးဖြင့်အသုံးပြုသည်။
ဒီမှာ Androidsis ပါ သင်ကြာရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောခွင့်ပြုချက်ရရန်အမျိုးမျိုးသောသင်ခန်းစာများကိုသင်ရှာနိုင်သည် စူပါအသုံးပြုသူ အသုံးပြုသူများဖြစ်ခြင်း အမြစ် အထူးသဖြင့်သင့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တီထွင်ခဲ့သောအသေးစိတ်အသေးစိတ်သင်ခန်းစာများကိုလိုက်နာပါ။
Root ကို Android ပေါ်မှာအန္တရာယ်ရှိသလား။
Android မှာ Root လုပ်ပါ တိကျသောပို့စ်တစ်ခုသို့မဟုတ်သင်ခန်းစာတစ်ခုစီတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပေးသောအသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်များကိုသင်လိုက်နာပါကလုံးဝအန္တရာယ်မရှိပါဥရောပတရားရုံး၏စီရင်ချက်များအရ Android တွင် Root ကိုသဘောပေါက်ခြင်းသည်ထုတ်ကုန်၏တရားဝင်အာမခံချက်ကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းသည်ဆမ်ဆောင်းကဲ့သို့ပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်သောကုမ္ပဏီကြီးများသည်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ကျော်သွားပြီးဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ တရား ၀ င်အာမခံချက်ကိုအမြစ်တွယ်ထားသောဆိပ်ကမ်းများအလိုအလျောက်ဖယ်ထုတ်ရန်။
ဒါကြောင့်ငါတို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ်ရှိတယ် Android ကို root လုပ်ပါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စင်တာ၏ထုတ်လုပ်သူအတူတူပင်၏တရားဝင်အာမခံချက်ကိုအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသေချာပေါက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
Android root သတင်း
အောက်ပါစာရင်းတွင်သင်၏ Android စက်ကို root လုပ်ရန်သတင်းများ၊ သတင်းများနှင့်သင်ခန်းစာအသစ်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းထားသည်။
Android 11 သည် ADB ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကြိုးမဲ့ဖြင့်ပေးနိုင်သည်
Android 10 မတိုင်မီလများအတွင်းဂူဂဲလ်မှယောက်ျားလေးများသည်လာမည့်အလုပ်မလုပ်တော့ပါ။
[ROOT] LG V3 အမျိုးအစားအားလုံးတွင် DTS 30D စတီရီယိုအသံကိုမည်သို့သက်ဝင်နိုင်မည်နည်း
por Manuel Ramirez လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
မနေ့ကပြောခဲ့သလိုပဲ၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိုဘိုင်းဖုန်းကို ROOT ပြုလုပ်ခြင်းအကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါခြွင်းချက်အနည်းငယ်သာရှိသည်။ သော်လည်း ...
Google သည် Android ဖြန့်ဝေမှုအချက်အလက်အသစ်ကိုဝေမျှပြီးဖြစ်သည်။ တိုးတက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီသောအချက်အလက်အချို့ ...
Android ဖုန်းကို root မပါဘဲဘယ်လိုပြောင်းမလဲ
por အာရုန်သည် Rivas လွန်ခဲ့တဲ့3အနှစ် .
Android ဖုန်းတစ်လုံးကို ၀ ယ်တဲ့အခါမှာသူက default font ဒါမှမဟုတ် typeface ပါလာတာကိုသတိပြုမိပါတယ်။ လား
Android root ၏အားသာချက်များနှင့်အားနည်းချက်များ
များစွာသော Android သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ဖုန်းကို root လုပ်ရန်ရွေးချယ်သည်။ ဒါဟာအတွက်အတော်လေးလူကြိုက်များဖြစ်လာသည်တစ်ခု option တစ်ခုဖြစ်သည် ...
YouTube ကိုမေ့လိုက်လျှင် YouTube Vanced ကအလှည့်တစ်ထောင်ပေးသည်။ ROOT မရှိ၊ ကြော်ငြာမရှိ၊ နောက်ခံလည်းမရှိ
မနေ့ကပဲ YouTube ရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းဟာကောင်းကင်ဘုံကနေအံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုလိုဖြစ်သွားတယ်။
Google က Rootless Pixel Launcher ကို Play Store မှဖယ်ရှားသည်
လွန်ခဲ့သောတစ်ပတ်ခန့်က၊ သြဂုတ်လ ၂၉ ရက်တွင်၊ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်မန်နူကသင့်အားရောက်ရှိလာခြင်းအကြောင်းပြောပြခဲ့သည်။
ယခုသင် Rootless Pixel Launcher ကို Google Play စတိုးမှရယူနိုင်သည်
ရက်အနည်းငယ်အတွင်း Google Play Store မှ Rootless Pixel Launcher ကိုရရှိနိုင်ပါပြီ။
Pokémon Go သည် root နှင့်ဆက်စပ်သောဖိုင်များရှိသောဖုန်းများကိုပိတ်ဆို့ထားသည်
Pokémon Go ၌ကစားသူများအတွက်သတင်းဆိုးဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ...
[APK] MOD Youtube တွင်နောက်ခံပြန်ဖွင့်ခြင်း၊ ကြော်ငြာမရှိ၊ ROOT မလိုအပ်ပါ
သင်၏ Huawei P9 Lite ကို Nougat 7.0 ဖြင့် root လုပ်ပါ
Android root ကို root နှင့်မကိုက်ညီတဲ့ apps တွေကိုဘယ်လိုသုံးမလဲ။ (HBO, Netflix, Pokemon Go စသည်တို့ ... )
သင်၏ Samsung Galaxy S7 ၏ခလုတ်များ၏အလင်းရောင်ကိုမည်သို့ထိန်းချုပ်ရမည်နည်း။ Galaxy အားလုံးနှင့် Root မပါ ၀ င်ပါ
Recovery and Root Samsung Galaxy S6 Edge Plus မှာ
Samsung Galaxy S7 နှင့် S7 Edge ကို Root လုပ်နည်း
Samsung Galaxy S5 Lollipop ကို root လုပ်ပါ။ Tutorial နှင့် Root အကြောင်းသင်သိထားသင့်သမျှ
Root Android: KingRoot ကိုသုံးပြီး Android ကို root လုပ်ပါ
စပိန်ဘာသာဖြင့် Xiaomi Mi4c, Root, TWRP Recovery နှင့် Rom များကိုအပြည့်အဝမည်သို့ကောင်းမွန်အောင်လုပ်မလဲ။
TWRP Recovery နှင့် Root Lenovo K3 Note ကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း